News – myanmar news
​အိန္ဒိယေ ရတပ် နဲ့ အတူ စစ်ေ လ့ကျင့် မယ့် မြန်မာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးလုပ်မယ့် ရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတခုမှာ
မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်မယ့်အကြောင်း အိန္ဒိယ ရေတပ်ပြောခွင့်ရ ကက်ပတိန် D K Sharma
ကပြောတာကို The Times of India အွန်လိုင်းသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံ ၁၆ နိုင်ငံထက်မနည်းပါဝင်ပြီး မတ်လ ၆ ရက်နေ့ကနေ ၈ ရက်ကြာကျင်းပမယ့် ဒီ
ရေတပ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို Milan လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒေသတွင်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့ဖို့နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေမှာ
ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေကို တိုက်ဖျက် ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို
လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂ နှစ်ကိုတကြိမ်လုပ်တဲ့ ဒီ ရေတပ်
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို Andaman နဲ့ Nicobar ကျွန်းတွေမှာ လုပ်မှာပါ။
အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသမှာ တရုတ်ရဲ့ စစ်ဘက်တည်ဆောက်မှု ကြီးထွားလာနေချိန်မှာပဲ
အခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို လုပ်ကြမှာဖြစ်ပြီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့ကာလအတွင်း
ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေက ရေတပ်စစ်ဦးစီးချုပ်တွေကြား ဆွေးနွေးတဲ့အခါ တရုတ်ရဲ့ စစ်အင်အား
တိုးချဲ့မှုကိစ္စ ပါလာဖွယ်ရှိတယ်လို့ အိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာအပြင် တခြားပါဝင်မယ့်နိုင်ငံတွေကတော့ သြစတြေးလျ၊ မလေးရှား၊ မော်လ်ဒိုက်ဗ်၊
မောရစ်ရှပ်စ်၊ နယူးဇီလန်၊ အိုမန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ စင်္ကာပူ၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကင်ညာနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Credit – VOA
အိန်ိဒယေ ရတပျ နဲ့ အတူ စဈေ လ့ကငျြ့ မယျ့ မွနျမာ
အိန်ိဒယနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈလကျခံပွီးလုပျမယျ့ ရတေပျစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုတခုမှာ
မွနျမာနိုငျငံလညျး ပါဝငျမယျ့အကွောငျး အိန်ိဒယ ရတေပျပွောခှငျ့ရ ကကျပတိနျ D K Sharma
ကပွောတာကို The Times of India အှနျလိုငျးသတငျးတပုဒျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
နိုငျငံ ၁၆ နိုငျငံထကျမနညျးပါဝငျပွီး မတျလ ၆ ရကျနကေ့နေ ၈ ရကျကွာကငျြးပမယျ့ ဒီ
ရတေပျ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို Milan လို့ အမညျပေးထားပါတယျ။ ဒသေတှငျး
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကို တိုးခြဲ့ဖို့နဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ပငျလယျရလေမျးကွောငျးတှမှော
ဥပဒမေဲ့လုပျရပျတှကေို တိုကျဖကျြ ဖို့ရညျရှယျခကျြနဲ့ ဒီစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို
လုပျမှာဖွဈတယျလို့ သတငျးမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ၂ နှဈကိုတကွိမျလုပျတဲ့ ဒီ ရတေပျ
စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို Andaman နဲ့ Nicobar ကြှနျးတှမှော လုပျမှာပါ။
အငျဒို-ပစိဖိတျဒသေမှာ တရုတျရဲ့ စဈဘကျတညျဆောကျမှု ကွီးထှားလာနခြေိနျမှာပဲ
အခုစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို လုပျကွမှာဖွဈပွီး စဈရေးလကေ့ငျြ့တဲ့ကာလအတှငျး
ပါဝငျတဲ့နိုငျငံတှကေ ရတေပျစဈဦးစီးခြုပျတှကွေား ဆှေးနှေးတဲ့အခါ တရုတျရဲ့ စဈအငျအား
တိုးခြဲ့မှုကိစ်စ ပါလာဖှယျရှိတယျလို့ အိန်ိဒယတာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။
မွနျမာအပွငျ တခွားပါဝငျမယျ့နိုငျငံတှကေတော့ သွစတွေးလြ၊ မလေးရှား၊ မျောလျဒိုကျဗျ၊
မောရဈရှပျဈ၊ နယူးဇီလနျ၊ အိုမနျ၊ ဗီယကျနမျ၊ ထိုငျး၊ တနျဇနျးနီးယား၊ သီရိလင်ျကာ၊ စင်ျကာပူ၊
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့၊ အငျဒိုနီးရှား၊ ကငျညာနဲ့ ကမ်ေဘာဒီးယားနိုငျငံတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
Author admin 1Posted on March 4, 2018 March 4, 2018 Categories စစ်Leaveacomment on ​အိန္ဒိယေ ရတပ် နဲ့ အတူ စစ်ေ လ့ကျင့် မယ့် မြန်မာ
သတင်းထောက် ၂ ဦး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးတို့အားမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တော-ဘူးသီးတောင်ဒေသ၌ လုံခြုံရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန်လည်အနားပေး စုဖွဲ့လျက်ရှိသည့် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ချဉ်းကပ်စည်းရုံး ဆက်သွယ်ပြီး ရခိုင်ဒေသနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ တပ်ဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးကြီးလုံခြုံရေး စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကို ပြည်ပသတင်းဌာနများသို့ ပေးပို့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တရားမဝင် သတင်း ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် ကိုဝလုံး (ခ) သက်ဦးမောင်မောင် နှင့် ကိုကျော်စိုးဦး (ခ) မိုးအောင် တို့ ၂ ဦးအား သက်သေအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့် ထောက်ကြန့်နယ်မြေရဲစခန်း (ပ) ၁၂၉၈/၂၀၁၇၊ ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ-၃ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နှင့် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူ ဒုတိယရဲမှူး မိုးရန်နိုင် နှင့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်လင်းတို့ ၂ ဦးကိုလည်း ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေပုဒ်မအရလည်းကောင်း၊ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေများအရလည်းကောင်း ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Author admin 1Posted on December 13, 2017 December 13, 2017 Categories NewsLeaveacomment on သတင်းထောက် ၂ ဦး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးတို့အားမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက် အသင့်ရှိနေသော ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့်ထောပတ် အနည်းငယ်အား ကြိတ်ပြီး တစ်နေ့သုံးကြိမ်မျှနားကြပ်ပေးလိုက်ရာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သောဝေဒနာ သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားသည်ဆိုတော့ ဟုတ်ပမလား ပင်ထင်စရာဖြစ်တော့သည်။
ထိုနည်းက လက်တွေ့အသုံးချဆေးဖက်အပင်များ အကြောင်း ဖတ်ရှု့ပြီး လက်တွေ့ကုသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စားမြိန်စေသောဟင်းခပ်မှုန့်မျှမက ဆေး ဖက်ဝင်သော ငရုတ်ကောင်းအကြောင်းသိပါလျှင် အိမ်တိုင်း တွင် ဆောင်ထားကြပေလိမ့်မည်။ လက်တွေ့သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်းသဘော တို့လည်း ပါသည်။ ချက်ချင်း သောက်ချက်ချင်းပျောက်မှ ကြိုက်ကြသည် ကသဘာဝပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ငရုတ်ကောင်းစေ့လေးများကို အပ်နှင့် စိုက်ကာမီးရှို့ပြီးအငွေ့ရှူခိုင်းပါက ကြို့ထိုးခြင်းပျောက်သည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် နွယ်ချိုမှုန့်ရော၍လျက်ပေးလိုက်ပါက လေထိုးလေအောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ဟင်းခါးပူပူလေးကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်ခပ်၍ သောက်ပေးပါကချွေး များထွက်ပြီး အဖျားရောဂါကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိကြသည်။ ငရုတ်ကောင်း(၃)စေ့ကို ထောပတ်နှင့်ကြိတ်ပြီး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ခန့် နားကြပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်းစေသည်။
အမှုန့်နှစ်ပဲသားကို ပျားရည်နှင့်လျက်ပေးပါက အခိုးအာကာသကိုရစေပြီး တင်ပြပါ ဝေဒနာတို့ သက်သာစေပြီး မိခင်များနို့ထွက်ကောင်းစေပါသည်။
(၆)အစာကြေ၊လေကြေ၊ဆီးကောင်း၊၀မ်းဖေါ်ဝမ်း ရောင်အတွက်နေ့စဉ် ငရုတ်ကောင်းနှစ်စေ့သုံး စေ့ကိုစားပေး ပါကသက်သာပျောက်ကင်း စေပါသည်။
(၇) ကြက်မျက်သင့်နာငရုတ်ကောင်းစေ့ကို ဒိန်ချဉ်ရည်ဖြင့်သွေးကာအနည်းငယ်မျှ မျက်စဉ်းခပ်ပေးပါက ကြက်မျက်သင့်နာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ငရုတ်ကောင်း(၅)မူးသားဂေါ်ရာဇင်း(၁)ကျပ်သား ထိုနှစ်ခုကိုအမှုန့်ပြုပြီး သနပ်ခါးဖြင့် (၁)ပတ်မျှ စမ်းလိမ်းကြည့်ပါ။(ပရဆေးဆိုင်တွင်ဝယ် နိုင်ပါသည်)။ပူရှိန်းရှိန်းအရသာ။
တောတောင်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းပြုရသူတို့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်စစ်စစ်နှင့် ရှိန်းခိုရောပြီး နေစဉ်ဆီးကင်းမျှစားပေးရသည်။ထိုသို့စား ပေးခြင်းဖြင့် အမှန်ပင် အဖျားရောဂါများ မဖြစ်တော့ပေ။
ရောစပ်ပြီး စားလိုက်ပါက နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ သွေးယိုစီးခြင်းနှင့်နှာစေးခြင်းကို ပျောက်ကင်း စေပါသည်။
ငါ့ ရုပ်ကိုကောင်းစေသည်မို့ငရုတ်ကောင်းဟုများအမည် ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့လေသလား မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ။
ငရုတ်ကောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆေးအသုံးများ ကျယ်ပြန့်စွာရှိနေပါဦးမည်။
ခေါငျးကိုကျခွငျးအတှကျ အသငျ့ရှိနသေော ငရုတျကောငျးမှုနျ့နှငျ့ထောပတျ အနညျးငယျအား ကွိတျပွီး တဈနသေုံ့းကွိမျမြှနားကွပျပေးလိုကျရာ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျသောဝဒေနာ သကျသာ ပြောကျကငျးသှားသညျဆိုတော့ ဟုတျပမလား ပငျထငျစရာဖွဈတော့သညျ။
ထိုနညျးက လကျတှအေ့သုံးခဆြေးဖကျအပငျမြား အကွောငျး ဖတျရှု့ပွီး လကျတှကေု့သလိုကျခွငျး ဖွဈပါသညျ။
စားမွိနျစသေောဟငျးခပျမှုနျ့မြှမက ဆေး ဖကျဝငျသော ငရုတျကောငျးအကွောငျးသိပါလြှငျ အိမျတိုငျး တှငျ ဆောငျထားကွပလေိမျ့မညျ။ လကျတှသေ့ကျသာ ပြောကျကငျးစသေော ဆေးနညျးသဘော တို့လညျး ပါသညျ။ ခကျြခငျြး သောကျခကျြခငျြးပြောကျမှ ကွိုကျကွသညျ ကသဘာဝပငျဖွဈပလေိမျ့မညျ။
ငရုတျကောငျးစလေ့ေးမြားကို အပျနှငျ့ စိုကျကာမီးရှို့ပွီးအငှရှေူ့ခိုငျးပါက ကွို့ထိုးခွငျးပြောကျသညျကအမှနျပငျဖွဈသညျ။
ငရုတျကောငျးမှုနျ့နှငျ့ နှယျခြိုမှုနျ့ရော၍လကျြပေးလိုကျပါက လထေိုးလအေောငျ့ခွငျး ပြောကျကငျးစပေါသညျ။
ဟငျးခါးပူပူလေးကို ငရုတျကောငျးမှုနျ့ထညျ့ခပျ၍ သောကျပေးပါကခြှေး မြားထှကျပွီး အဖြားရောဂါကို သကျသာ ပြောကျကငျးစပေါသညျ။
ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိကွသညျ။ ငရုတျကောငျး(၃)စကေို့ ထောပတျနှငျ့ကွိတျပွီး တဈနနှေ့ဈကွိမျခနျ့ နားကွပျပေးပါက ပြောကျကငျးစသေညျ။
အမှုနျ့နှဈပဲသားကို ပြားရညျနှငျ့လကျြပေးပါက အခိုးအာကာသကိုရစပွေီး တငျပွပါ ဝဒေနာတို့ သကျသာစပွေီး မိခငျမြားနို့ထှကျကောငျးစပေါသညျ။
(၆)အစာကွေ၊လကွေေ၊ဆီးကောငျး၊ဝမျးဖျေါဝမျး ရောငျအတှကျနစေ့ဉျ ငရုတျကောငျးနှဈစသေုံ့း စကေို့စားပေး ပါကသကျသာပြောကျကငျး စပေါသညျ။
(၇) ကွကျမကျြသငျ့နာငရုတျကောငျးစကေို့ ဒိနျခဉျြရညျဖွငျ့သှေးကာအနညျးငယျမြှ မကျြစဉျးခပျပေးပါက ကွကျမကျြသငျ့နာကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါသညျ။
ငရုတျကောငျး(၅)မူးသားဂျေါရာဇငျး(၁)ကပျြသား ထိုနှဈခုကိုအမှုနျ့ပွုပွီး သနပျခါးဖွငျ့ (၁)ပတျမြှ စမျးလိမျးကွညျ့ပါ။(ပရဆေးဆိုငျတှငျဝယျ နိုငျပါသညျ)။ပူရှိနျးရှိနျးအရသာ။
တောတောငျဖွငျ့ အသကျမှေးဝမျးပွုရသူတို့ ငရုတျကောငျးမှုနျ့စဈစဈနှငျ့ ရှိနျးခိုရောပွီး နစေဉျဆီးကငျးမြှစားပေးရသညျ။ထိုသို့စား ပေးခွငျးဖွငျ့ အမှနျပငျ အဖြားရောဂါမြား မဖွဈတော့ပေ။
ရောစပျပွီး စားလိုကျပါက နှာခေါငျးသှေးလြှံခွငျး၊ သှေးယိုစီးခွငျးနှငျ့နှာစေးခွငျးကို ပြောကျကငျး စပေါသညျ။
ငါ့ ရုပျကိုကောငျးစသေညျမို့ငရုတျကောငျးဟုမြားအမညျ ကငျပှနျးတပျခဲ့လသေလား မစဉျးစားတတျတော့ပါ။
ငရုတျကောငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဆေးအသုံးမြား ကယျြပွနျ့စှာရှိနပေါဦးမညျ။
Author adminPosted on November 14, 2017 Categories NewsLeaveacomment on စွမ်းအားရှင်ငရုတ်ကောင်း
ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ် နဲ့ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ ကိုကို မမများအတွက် နည်းလက်ဆောင်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သားသမီးရတနာဖြစ်အောင် နေထိုင်ပါ။
လူတစ်ယောက် ရဲ့ “ကံ”ဆိုတာက မှန်တစ်ချပ်လိုပါပဲ
သင် ကောင်းရင် ကောင်းသောလူနဲ့ တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပီး
သင် သာ တန်ဖိုးကြီးသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင်နဲ့ထိုက်တန်သောသူနဲ့
ဒါကလည်း ဝဋ်ကြွေးလို့ ပြောရမလား
သေချာတစ်ခုကတော့ လူဆိုတာ တန်ရာတန်ရာပဲ
အဓိကက ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကို လက်ခံနိူင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်​။
လေးစားစွာဖြင့်♥ ♥ ♥
ယောကျြားကောငျး ယောကျြားမွတျ နဲ့ မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျကို ပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့ ကိုကို မမမြားအတှကျ နညျးလကျဆောငျ
ကိုယျကိုယျတိုငျ သားသမီးရတနာဖွဈအောငျ နထေိုငျပါ။
လူတဈယောကျ ရဲ့ “ကံ”ဆိုတာက မှနျတဈခပျြလိုပါပဲ
သငျ ကောငျးရငျ ကောငျးသောလူနဲ့ တှဆေုံ့ရမှာဖွဈပီး
သငျ သာ တနျဖိုးကွီးသူတဈယောကျဆိုရငျ သငျနဲ့ထိုကျတနျသောသူနဲ့
ဒါကလညျး ဝဋျကွှေးလို့ ပွောရမလား
သခြောတဈခုကတော့ လူဆိုတာ တနျရာတနျရာပဲ
အဓိကက ကိုယျနဲ့ထိုကျတနျတဲ့အရာကို လကျခံနိူငျဖို့ပဲလိုပါတယျ။
လေးစားစှာဖွငျ့♥ ♥ ♥
Author adminPosted on November 9, 2017 Categories NewsLeaveacomment on ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ် နဲ့ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ ကိုကို မမများအတွက် နည်းလက်ဆောင်
လုံခြုံရေးအရဆိုကာ မန္တလေးတောင်ပေါ်သို့ ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်း တက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရသဖြင့် မန္တလေးတောင်ပေါ်သို့ ည ၉နာရီနောက်ပိုင်း တက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း တောင် တော်ဂေါပကအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ များက ပြောသည်။
ယခင်က မန္တလေးတောင် ပေါ်သို့ ညပိုင်းတက်ရောက်ခြင်း ကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော် လည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်းတက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်အရေးကြောင့် မန္တလေးတောင် တွင် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများမဖြစ်ပွားစေရန် မန္တလေး ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က လုံခြုံရေးဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သောကြောင့် စက်တင်ဘာ ၈ရက်မှစတင်ကာ အထူးလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေးတောင်ဂေါပကအဖွဲ့က ပြောသည်။
‘‘ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်းတက် ရောက်ခွင့်ပိတ်တာက အရင်က မလုပ်ဖူးပါဘူး။ ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ လောက်ထိ တက်နေကြတာပဲ။ အခုတော့ ၉ နာရီဆိုရင် အားလုံး ပြန်ဆင်းခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျတော့လည်း ဘုရားဖူးချင်လို့ လာတဲ့သူတွေ မရှိတော့ပါဘူး’’ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းထွန်း က ပြောသည်။
မန္တလေးတောင်ဆင်းလမ်း တွင် ညအချိန်လာရောက်လည် ပတ်သည့် လူငယ်သမီးရည်းစား စုံတွဲများ လုယက်ခံရခြင်းများ ယခင်က မကြာခဏဖြစ်ပွားသောကြောင်း စိုးရိမ်ရကြောင်း ဒေသခံ အချို့က ပြောသည်။
‘‘အရင်ကတော့ ၉ နာရီ ၁၀ နာရီထိ ညရှုခင်းတွေတက်ကြည့် လို့ရတာပေါ့။ လုံခြုံရေးအရဆိုရင် တော့ ကောင်းပါတယ်။ တချို့ကျ တော့ သမီးရည်းစားအတွဲတွေ၊ မကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့သူတွေ လည်း တက်ကြတော့ ခုလိုလုပ် လိုက်တော့လည်း အန္တရာယ်ကင်း တာပေါ့’’ ဟု အသက်(၂၈)နှစ် အရွယ် မန္တလေးမြို့ခံကိုဇော်မျိုး အောင်က ပြောကြားသည်။
မန္တလေးတောင်တွင် အထူး လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသဖြင့် ယခုအခါ လုယက်မှုဖြစ်ရပ်များ မဖြစ်ပွားတော့ကြောင်း၊ ထို့ ကြောင့် တောင်ပေါ်သို့ ည ၉ နာရီ နောက်ပိုင်းတက်ရောက်ခွင့်မပြု သေးဘဲ အထူးလုံခြုံရေးအစီအမံ များ ဆက်လက်ချထားဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့တာဝန်ရှိ သူများက ပြောသည်။
ညစဉ်လုံခြုံရေးလှည့်လည် ရာတွင် တောင်တော်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က ဆရာတော် ၁၀ ပါး၊ ၁၅ ပါးခန့် ဦးဆောင်ကာ လုံခြုံ ရေးဝန်ထမ်း ၃၀ ဦးနှင့် ဂေါပက အဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ အစရှိသည့် အဖွဲ့ပေါင်းစုံက တောင်ဆင်း၊ တောင်တက်လမ်းများ၊ ဘုရားစောင်းတန်းများတွင် လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်းများဖြင့် လှည့်လည်စစ်ဆေးနေကြောင်း မန္တလေးတောင်ဂေါပကအဖွဲ့က ပြောသည်။
လုံခွုံရေးအရဆိုကာ မန်တလေးတောငျပျေါသို့ ည ၉ နာရီနောကျပိုငျး တကျရောကျခှငျ့ပိတျပငျ
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သော အကွမျးဖကျမှုမြားနှငျ့ ဆကျစပျ၍ လုံခွုံရေးစိုးရိမျရသဖွငျ့ မန်တလေးတောငျပျေါသို့ ည ၉နာရီနောကျပိုငျး တကျရောကျခှငျ့မပွုတော့ကွောငျး တောငျ တျောဂေါပကအဖှဲ့ တာဝနျရှိသူ မြားက ပွောသညျ။
ယခငျက မန်တလေးတောငျ ပျေါသို့ ညပိုငျးတကျရောကျခွငျး ကို ကနျ့သတျထားခွငျးမရှိသျော လညျး လုံခွုံရေးအခွအေနအေရ ည ၉ နာရီနောကျပိုငျးတကျရောကျခှငျ့မပွုတော့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ရခိုငျအရေးကွောငျ့ မန်တလေးတောငျ တှငျ မလိုလားအပျသော ပွဿနာမြားမဖွဈပှားစရေနျ မန်တလေး ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့က လုံခွုံရေးဆောငျ ရှကျရနျ ညှနျကွားခဲ့သောကွောငျ့ စကျတငျဘာ ၈ရကျမှစတငျကာ အထူးလုံခွုံရေးတိုးမွှငျ့ခဲ့ကွောငျးမန်တလေးတောငျဂေါပကအဖှဲ့က ပွောသညျ။
‘‘ည ၉ နာရီနောကျပိုငျးတကျ ရောကျခှငျ့ပိတျတာက အရငျက မလုပျဖူးပါဘူး။ ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ လောကျထိ တကျနကွေတာပဲ။ အခုတော့ ၉ နာရီဆိုရငျ အားလုံး ပွနျဆငျးခိုငျးပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျ ကတြော့လညျး ဘုရားဖူးခငျြလို့ လာတဲ့သူတှေ မရှိတော့ပါဘူး’’ဟု ဂေါပကအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသိနျးထှနျး က ပွောသညျ။
မန်တလေးတောငျဆငျးလမျး တှငျ ညအခြိနျလာရောကျလညျ ပတျသညျ့ လူငယျသမီးရညျးစား စုံတှဲမြား လုယကျခံရခွငျးမြား ယခငျက မကွာခဏဖွဈပှားသောကွောငျး စိုးရိမျရကွောငျး ဒသေခံ အခြို့က ပွောသညျ။
‘‘အရငျကတော့ ၉ နာရီ ၁၀ နာရီထိ ညရှုခငျးတှတေကျကွညျ့ လို့ရတာပေါ့။ လုံခွုံရေးအရဆိုရငျ တော့ ကောငျးပါတယျ။ တခြို့ကြ တော့ သမီးရညျးစားအတှဲတှေ၊ မကောငျးတာလုပျခငျြတဲ့သူတှေ လညျး တကျကွတော့ ခုလိုလုပျ လိုကျတော့လညျး အန်တရာယျကငျး တာပေါ့’’ ဟု အသကျ(၂၈)နှဈ အရှယျ မန်တလေးမွို့ခံကိုဇျောမြိုး အောငျက ပွောကွားသညျ။
မန်တလေးတောငျတှငျ အထူး လုံခွုံရေးဆောငျရှကျနသေဖွငျ့ ယခုအခါ လုယကျမှုဖွဈရပျမြား မဖွဈပှားတော့ကွောငျး၊ ထို့ ကွောငျ့ တောငျပျေါသို့ ည ၉ နာရီ နောကျပိုငျးတကျရောကျခှငျ့မပွု သေးဘဲ အထူးလုံခွုံရေးအစီအမံ မြား ဆကျလကျခထြားဦးမညျ ဖွဈကွောငျး ဂေါပကအဖှဲ့တာဝနျရှိ သူမြားက ပွောသညျ။
ညစဉျလုံခွုံရေးလှညျ့လညျ ရာတှငျ တောငျတျောအုပျခြုပျရေး အဖှဲ့က ဆရာတျော ၁၀ ပါး၊ ၁၅ ပါးခနျ့ ဦးဆောငျကာ လုံခွုံ ရေးဝနျထမျး ၃၀ ဦးနှငျ့ ဂေါပက အဖှဲ့ဝငျမြား၊ နယျမွခေံရဲတပျဖှဲ့ အစရှိသညျ့ အဖှဲ့ပေါငျးစုံက တောငျဆငျး၊ တောငျတကျလမျးမြား၊ ဘုရားစောငျးတနျးမြားတှငျ လှညျ့ကငျး၊ ပတျကငျးမြားဖွငျ့ လှညျ့လညျစဈဆေးနကွေောငျး မန်တလေးတောငျဂေါပကအဖှဲ့က ပွောသညျ။
Author adminPosted on November 9, 2017 Categories NewsLeaveacomment on လုံခြုံရေးအရဆိုကာ မန္တလေးတောင်ပေါ်သို့ ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်း တက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်
ဘာမြူဒါ ဆိုရင် အဖြေရှာဖို့ခက်ခဲတဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာလို့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဓိကကတော့ အဲဒီနေရာကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ သင်္ဘောတွေလေယာဉ်တွေ အစအနမကျန်ပဲ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်လို့ပါပဲ။ ဘာမြူဒါတြိဂံလိုပဲ နေရာတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုရင် မသိသေးသူများ အံသြသွားနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။
ဘာမြူဒါနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ရေကန်တစ်ခုဟာ အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ် နာဂဒေသ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒေသခံတွေကတော့ ဒီကန်ကို သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ နောင်ယန်းအင်း လို့ ခေါ်ပြီး အများဆုံးသိကြတဲ့နာမည်ကတော့ The Lake Of No Return (ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လက်နက်ခဲယမ်း နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်ဖို့ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ လီဒိုလမ်းမကြီး (သို့) အိန္ဒိယ-တရုတ်-မြန်မာ လမ်း ရဲ့ဘေး ပန်ဆောင်ကျေးရွာ အနီးမှာ တည်ရှိနေတဲ့ကန်ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းများအရ ဒီကန်ကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တဲ့ မဟာမိတ် အမေရိကန်လေယာဉ်ပေါင်းများစွာ ဟာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ လေယာဉ်တွေဟာ ရေကန်ထဲကို ပျက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။။ နောက်တစ်ခါကတော့ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာပါတဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်တစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရှုံးနိမ့်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်ဟာ မျက်စိလည်ပြီး ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါ စခန်းချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစခန်းချစဉ်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ငှက်ဖျားရောဂါအပြင်းအထန်ကူးစက်ခံရပြီး အားလုံးသေဆုံးကုန်ကြပါတယ်။
ဒီကန်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် မဟာမိတ်အမေရိကန်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီကန်ကို စစ်ဆေးဖို့ စစ်သားတချို့ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစစ်သားတွေအားလုံးလည်း ထူးဆန်းစွာသေဆုံးကုန်ကြပြန်ပါတယ်။ ၁၉၄၂တုန်းကလည်း ဗြိတိန်စစ်သားတွေဟာ ထွက်ပြေးရင်း ဒီကန်နေရာမှာ နုံးတွေကျွံပြီး ပျောက်ဆုံးကုန်ကြပြန်ပါတယ်။ စာရေးသူတစ်ယောက်ကလည်း ဒီနေရာမှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အစ္စရေးလူမျိုးတစ်မျိုးစု တစ်စု ပုန်းအောင်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှေးဒေသခံတွေအနေနဲ့တော့ ဒီကန်ဟာ နတ်ဘီလူးတွေရှိနေတဲ့ကန်လို့ ယုံကြည်နေကြပြီး ဒီကန်ထဲကငါးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားကြပါတယ်။ ဒီကန်ဟာ နဂါးတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံပြင် ဒဏ္ဍာရီတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင်တွေကတော့ လေယာဉ်တွေပျက်ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာ လေယာဉ်မှူးတွေဟာ ဒီနေရာက နုန်းမြေပေါ်ကို အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့တာကြောင့် အန္တရယ်ထဲကျရောက်ပြီး ပျက်ကြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာကြောင့် ဒီကန်ကို ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန် ( The Lake Of No Return) လို့ အမည်ပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကန်ရဲ့အကျယ်ကတော့ အလျှား ၁.၄ကီလိုမီတာ အနံ ၀.၈ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ လီဒိုလမ်းမကြီးနဲ့ ၂.၅ကီလိုမီတာ အကွာမှာ တည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေ သွားလာရအနည်းငယ်ခက်ပြီး အိန္ဒိယဘက်ကတော့ လွယ်ကူပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေမကြာခဏလာလေ့ရှိကာ အိန္ဒိယရဲ့ ဘာမြူဒါလို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံက ဘာမွူဒါ (သို့) မွနျမာ့ပွနျလမျးမဲ့ရကေနျ
ဘာမွူဒါ ဆိုရငျ အဖွရှောဖို့ခကျခဲတဲ့ ထူးဆနျးမှုတှပွေညျ့နှကျနတေဲ့ နရောလို့ အားလုံးသိပွီးဖွဈမှာပါ။ အဓိကကတော့ အဲဒီနရောကို ဖွတျသနျးသှားတဲ့ သငေ်ျဘာတှလေယောဉျတှေ အစအနမကနျြပဲ ပြောကျပြောကျသှားတတျလို့ပါပဲ။ ဘာမွူဒါတွိဂံလိုပဲ နရောတဈခုမွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိတယျလို့ ဆိုရငျ မသိသေးသူမြား အံသွသှားနိုငျပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ ဘာမွူဒါနဲ့ခပျဆငျဆငျတူတဲ့ ပွနျလမျးမဲ့ရကေနျလို့ အမညျပေးထားတဲ့ ရကေနျတဈခုဟာ အိန်ဒိယမွနျမာနယျစပျ နာဂဒသေ မွနျမာ့မွပေျေါမှာ တညျရှိနပေါတယျ။ ဒသေခံတှကေတော့ ဒီကနျကို သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ နောငျယနျးအငျး လို့ ချေါပွီး အမြားဆုံးသိကွတဲ့နာမညျကတော့ The Lake Of No Return (ပွနျလမျးမဲ့ရကေနျ) ဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးက လကျနကျခဲယမျး နဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှသေယျဆောငျဖို့ ဖောကျလုပျထားတဲ့ လီဒိုလမျးမကွီး (သို့) အိန်ဒိယ-တရုတျ-မွနျမာ လမျး ရဲ့ဘေး ပနျဆောငျကြေးရှာ အနီးမှာ တညျရှိနတေဲ့ကနျဖွဈပါတယျ။ မှတျတမျးမြားအရ ဒီကနျကို ဖွတျသနျးသှားခဲ့တဲ့ မဟာမိတျ အမရေိကနျလယောဉျပေါငျးမြားစှာ ဟာ ပြောကျဆုံးခဲ့ဖူးပါတယျ။ တကယျတော့ လယောဉျတှဟော ရကေနျထဲကို ပကျြကခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။။ နောကျတဈခါကတော့ ဒါဇငျပေါငျးမြားစှာပါတဲ့ ဂပြနျစဈတပျတဈတပျဖွဈပါတယျ။ စဈရှုံးနိမျ့ပွီးထှကျပွေးလာတဲ့ ဂပြနျစဈတပျဟာ မကျြစိလညျပွီး ဒီနရောကိုရောကျတဲ့အခါ စခနျးခခြဲ့ပါတယျ။ အဲဒီစခနျးခစြဉျရကျပိုငျးအတှငျးမှာပဲ ငှကျဖြားရောဂါအပွငျးအထနျကူးစကျခံရပွီး အားလုံးသဆေုံးကုနျကွပါတယျ။
ဒီကနျရဲ့ထူးဆနျးတဲ့ဖွဈရပျတှကွေောငျ့ မဟာမိတျအမရေိကနျစဈခေါငျးဆောငျတှဟော ဒီကနျကို စဈဆေးဖို့ စဈသားတခြို့ကိုစလှေတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီစဈသားတှအေားလုံးလညျး ထူးဆနျးစှာသဆေုံးကုနျကွပွနျပါတယျ။ ၁၉၄၂တုနျးကလညျး ဗွိတိနျစဈသားတှဟော ထှကျပွေးရငျး ဒီကနျနရောမှာ နုံးတှကြှေံပွီး ပြောကျဆုံးကုနျကွပွနျပါတယျ။ စာရေးသူတဈယောကျကလညျး ဒီနရောမှာ ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ အစ်စရေးလူမြိုးတဈမြိုးစု တဈစု ပုနျးအောငျးနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရှေးဒသေခံတှအေနနေဲ့တော့ ဒီကနျဟာ နတျဘီလူးတှရှေိနတေဲ့ကနျလို့ ယုံကွညျနကွေပွီး ဒီကနျထဲကငါးတှကေိုဘေးမဲ့ပေးထားကွပါတယျ။ ဒီကနျဟာ နဂါးတှနေဲ့ ဆကျနှယျနတေယျဆိုတဲ့ ပုံပွငျ ဒဏ်ဍာရီတှလေညျး ရှိပါတယျ။ သုတသေနပညာရှငျတှကေတော့ လယောဉျတှပေကျြကခြဲ့တဲ့အကွောငျးဟာ လယောဉျမှူးတှဟော ဒီနရောက နုနျးမွပေျေါကို အရေးပျေါ ဆငျးသကျခဲ့တာကွောငျ့ အန်တရယျထဲကရြောကျပွီး ပကျြကွခဲ့ခွငျးဖွဈတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီလိုထူးဆနျးမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတောကွောငျ့ ဒီကနျကို ပွနျလမျးမဲ့ရကေနျ ( The Lake Of No Return) လို့ အမညျပေးခဲ့ကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကနျရဲ့အကယျြကတော့ အလြှား ၁.၄ကီလိုမီတာ အနံ ဝ.၈ကီလိုမီတာဖွဈပါတယျ။ လီဒိုလမျးမကွီးနဲ့ ၂.၅ကီလိုမီတာ အကှာမှာ တညျရှိတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောကို မွနျမာနိုငျငံဘကျကနေ သှားလာရအနညျးငယျခကျပွီး အိန်ဒိယဘကျကတော့ လှယျကူပွီး ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှမေကွာခဏလာလရှေိ့ကာ အိန်ဒိယရဲ့ ဘာမွူဒါလို့ နာမညျကွီးပါတယျ။
Author adminPosted on November 4, 2017 November 4, 2017 Categories NewsLeaveacomment on မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်
​(ဂျပန် ဇီးရိုးလေယာဉ် _ 零戦)
ဂျပန်တွေ ဒုကမ္ဘာစစ်ထဲမှာ Mitsubishi က ၁၉၄၀မှ ၁၉၄၅ခုနှစ်အထိသစ်သား
ကိုယ်ထည်နဲ့သံပြားအုပ်ပြီး လေယာဉ်လုပ်ဖူးတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ လေးလံသော စပစ်ဖိုက်ယာကို ဆော်ဖို့ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ဇီးရိုး ဆိုပြီးထုတ်ဖူးတယ်။
အဓိက ပိတ်ဆို့မှုတွေကြားထဲက အံတုပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာကို သတ္တုစပ်သုံးပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးအောင် ဆီတိုင်ကီကိုသေးပစ်တယ်။
အပြင်ထုတ်ထားတယ်။အမေရိကန်ဖိုက်တာထက် လေပေါ်ဂျွန်းထိုးပြီး လေကြောင်းတိုက်ပွဲမှာ ၁နှစ်ကျော်လောက် ဗိုလ်ကျနေတယ်။
တနေ့တော့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကျွန်းတကျွန်းပေါ်ကနွံတောထဲမယ် နွံနစ်နေတဲ့ ဇီးရိုးတစီးကို အမေရိကန်တွေ ဘုရားသခင်ထံက ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ရလိုက်တယ်။
သေချာလေ့လာကြည့်တော့ သစ်သားဘော်ဒီကိုမှီငြမ်းပြီး လေယာဉ်တောင်ပံကို တပ်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်။
တော်တော်လေးကို ပေါ့ပါးသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဒီပေါ့ပါးမှုကလည်း ဇီးရိုးကို လေပေါ်သင်္ဂြိုလ်စက်ဘဝကို
ရောက်အောင် သူ့ဖင်မြှီးပိုင်းက ဆီတိုင်ကီကဒုက္ခပေးနိုငိတဲ့ပျော့ကွက်ဆိုတာ အမေရိကန်တွေ တွေ့သွားတယ်။
နောက်တော့ လေကြောင်းစစ်ပွဲမှာ ဖိုင်ယာနဲ့ ဇီးရိုးတွေ့ရင် ဖိုင်ယာ၂စီးနဲ့ညှပ်တိုက်တော့ ဂျပန်တွေ လေပေါ်မှာဗိုလ်မကျနိုင်တော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဂျပန်တို့ကြောင့် ဒီနေ့ F16 တို့ MiG တို့တွေရဲ့ခေတ်တခုအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်လေကြောင်းပညာရှင်တွေပြောကြားတာကတော့ ဇီးရိုးဒီဇိုင်းပညာရှင် ဟိုလီကာ့ရှိ ဂျီးဒို(掘越二郎）ဟာ ဘုရားကျောင်းတည်တဲ့လက်သမားဖြစ်ဖူးပြီး ရိုးရာပညာနဲ့တည်ဆောက်တဲ့တိုင်တွေ ထုတ်တန်းတွေ တွယ်ဆက်တဲ့နည်းပညာကို တုပထားတယ်လို့ စာတအုပ်မှာ ဖတ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။
လေယာဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားသော မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည်မျှဝေ
ဂပြနျတှေ ဒုကမ်ဘာစဈထဲမှာ Mitsubishi က ၁၉၄၀မှ ၁၉၄၅ခုနှဈအထိသဈသား
ကိုယျထညျနဲ့သံပွားအုပျပွီး လယောဉျလုပျဖူးတယျ။အမရေိကနျရဲ့ လေးလံသော စပဈဖိုကျယာကို ဆျောဖို့ ပေါ့ပါးသှကျလကျတဲ့ဇီးရိုး ဆိုပွီးထုတျဖူးတယျ။
အဓိက ပိတျဆို့မှုတှကွေားထဲက အံတုပွီး လိုအပျတဲ့နရောကို သတ်တုစပျသုံးပွီး ပိုမိုပေါ့ပါးအောငျ ဆီတိုငျကီကိုသေးပဈတယျ။
အပွငျထုတျထားတယျ။အမရေိကနျဖိုကျတာထကျ လပေျေါဂြှနျးထိုးပွီး လကွေောငျးတိုကျပှဲမှာ ၁နှဈကြျောလောကျ ဗိုလျကနြတေယျ။
တနတေ့ော့ဖိလဈပိုငျရဲ့ကြှနျးတကြှနျးပျေါကနှံတောထဲမယျ နှံနဈနတေဲ့ ဇီးရိုးတစီးကို အမရေိကနျတှေ ဘုရားသခငျထံက ခရစ်စမတျလကျဆောငျရလိုကျတယျ။
သခြောလလေ့ာကွညျ့တော့ သဈသားဘျောဒီကိုမှီငွမျးပွီး လယောဉျတောငျပံကို တပျဆငျထားတာတှရေ့တယျ။
တျောတျောလေးကို ပေါ့ပါးသှားတာပေါ့။ဒါပမေဲ့ ဒီပေါ့ပါးမှုကလညျး ဇီးရိုးကို လပေျေါသင်ျဂွိုလျစကျဘဝကို
ရောကျအောငျ သူ့ဖငျမွှီးပိုငျးက ဆီတိုငျကီကဒုက်ခပေးနိုငိတဲ့ပြော့ကှကျဆိုတာ အမရေိကနျတှေ တှသှေ့ားတယျ။
နောကျတော့ လကွေောငျးစဈပှဲမှာ ဖိုငျယာနဲ့ ဇီးရိုးတှရေ့ငျ ဖိုငျယာ၂စီးနဲ့ညှပျတိုကျတော့ ဂပြနျတှေ လပေျေါမှာဗိုလျမကနြိုငျတော့ဘူး။
ဒါပမေဲ့ ဂပြနျတို့ကွောငျ့ ဒီနေ့ F16 တို့ MiG တို့တှရေဲ့ခတျေတခုအဖွဈ ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ဂပြနျလကွေောငျးပညာရှငျတှပွေောကွားတာကတော့ ဇီးရိုးဒီဇိုငျးပညာရှငျ ဟိုလီကာ့ရှိ ဂြီးဒို(掘越二郎）ဟာ ဘုရားကြောငျးတညျတဲ့လကျသမားဖွဈဖူးပွီး ရိုးရာပညာနဲ့တညျဆောကျတဲ့တိုငျတှေ ထုတျတနျးတှေ တှယျဆကျတဲ့နညျးပညာကို တုပထားတယျလို့ စာတအုပျမှာ ဖတျမိပါတယျခငျဗြာ။
လယောဉျကိုစိတျဝငျစားသော မိတျဆှမြေားကို ပွနျလညျမြှဝေ
Author admin 1Posted on November 3, 2017 November 4, 2017 Categories Uncategorized, စစ်Leaveacomment on ​(ဂျပန် ဇီးရိုးလေယာဉ် _ 零戦)
အောင်လအန်ဆန်နဲ့ အလိန်းဂါလာနီပွဲ ပျက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားများ ပြန့်နေ
လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြမည့် အလိန်းဂါလာနီနှင့် အောင်လအန်ဆန်တို့ပွဲ ပျက်သွားပြီ ဆိုသည့်သတင်းက မဟုတ်မှန်ဘူး လို့ သိရပါတယ်။
မနေ့က ဖေ့စ်ဘွက်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ယင်းသတင်းအမှားများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ နားလည်မှု လွဲလို့ ပျက်သွားတယ် ဆိုပြီး ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း သတင်းဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ပွဲကိုစီစဉ်သည့် ဗားမားလက်ခမောင်း ကုမ္ဗဏီပိုင်ရှင် ဦးဇေသီဟက ၄င်း၏ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာတွင် ယနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်မနက်) တွင် ရှင်းလင်း ရေးသားထားသည်။
“ပွဲပျက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား လို့ မေးမနေပါနဲ့။ တသက်လုံး စကားတခွန်းတောင် မှန်အောင်မပြောဖူးတဲ့သူနဲ့ တသက်လုံး ကောက်ကျစ်ပြီး ကျွန်တော့်ပွဲကို မနာလိုစိတ်ရှိပြီး လိုက်ဖျက်နေတဲ့လူ ၂ ယောက်ပေါင်းပြီး သတင်းမှားထုတ်တာပါ။ လက်သီးပုန်းတွေပေါ့။” ဟု ရေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
အောင်လအန်ဆန်နှင့် အလိန်းဂါလာနီတို့အကြား အဆင်မပြေတာ မရှိပေမယ့်လည်း ပွဲစီစဉ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း နှောက်ယှက်မှုကြောင့် ဒီလုပ်ကြံသတင်း ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အလိန်းဂါလာနီက ဟောင်ကောင်မှ မြန်မာပြည်သို့ လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Photos©Aung La Nsang
အောငျလအနျဆနျနဲ့ အလိနျးဂါလာနီပှဲ ပကျြပွီ ဆိုတဲ့ သတငျးအမှားမြား ပွနျ့နေ
လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ယှဉျပွိုငျ ထိုးသတျကွမညျ့ အလိနျးဂါလာနီနှငျ့ အောငျလအနျဆနျတို့ပှဲ ပကျြသှားပွီ ဆိုသညျ့သတငျးက မဟုတျမှနျဘူး လို့ သိရပါတယျ။
မနကေ့ ဖစျေ့ဘှကျလူမှုကှနျယကျပျေါတှငျ ယငျးသတငျးအမှားမြား ထှကျပျေါလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ငှကွေေးဆိုငျရာ နားလညျမှု လှဲလို့ ပကျြသှားတယျ ဆိုပွီး ရေးသားဖွနျ့ဝခေဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး သတငျးဟာ မဟုတျမှနျကွောငျး ပှဲကိုစီစဉျသညျ့ ဗားမားလကျခမောငျး ကုမ်ဗဏီပိုငျရှငျ ဦးဇသေီဟက ၎င်းငျး၏ ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာတှငျ ယနေ့ (အောကျတိုဘာလ ၃၁ ရကျမနကျ) တှငျ ရှငျးလငျး ရေးသားထားသညျ။
“ပှဲပကျြတယျဆိုတာ ဟုတျလား လို့ မေးမနပေါနဲ့။ တသကျလုံး စကားတခှနျးတောငျ မှနျအောငျမပွောဖူးတဲ့သူနဲ့ တသကျလုံး ကောကျကဈြပွီး ကြှနျတေျာ့ပှဲကို မနာလိုစိတျရှိပွီး လိုကျဖကျြနတေဲ့လူ ၂ ယောကျပေါငျးပွီး သတငျးမှားထုတျတာပါ။ လကျသီးပုနျးတှပေေါ့။” ဟု ရေးထားသညျကို တှရေ့သညျ။
အောငျလအနျဆနျနှငျ့ အလိနျးဂါလာနီတို့အကွား အဆငျမပွတော မရှိပမေယျ့လညျး ပှဲစီစဉျသူလုပျငနျးရှငျမြားအခငျြးခငျြး နှောကျယှကျမှုကွောငျ့ ဒီလုပျကွံသတငျး ထှကျပျေါလာတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
အလိနျးဂါလာနီက ဟောငျကောငျမှ မွနျမာပွညျသို့ လာနပွေီဖွဈပါတယျ။
Author adminPosted on October 31, 2017 Categories NewsLeaveacomment on အောင်လအန်ဆန်နဲ့ အလိန်းဂါလာနီပွဲ ပျက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားများ ပြန့်နေ
ကျနော် ဒီ အပျိုကြီးနဲ့ မှားခဲ့တယ်ဆိုတာ…၀န်ခံပါတယ်…။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ..။
သူ့ဘက်ကမမှားဘူး ကျနော့ဘက်ကမှားခဲ့တာပါ။ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်အမှားကို တာဝန်ယူရဲရမှာပေါ့ ။ကျနော့ အမှားအတွက် တာဝန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီနေ့က ပေါ့ ။
ကောင်းကင်တစ်ခွင်စစ်ခင်းနေသည့်အလား လျှပ်စီးကြောင်းများကလက်နက်ခဲယမ်းများပစ်ဖောက်နေသလို လက်ခနဲလက်ခနဲ အားမာန်အပြည့်နဲ့ငြာသံပေးလို့ ၊ပြိုကျတော့မယောင် မိုးသားတွေက တစ်ရွေ့ရွေ့ နဲ့ ဒေါသတွေကိုမြိုသိပ်ပြီး အမျက်ခြောင်းခြောင်းထွက်လို့ ဘယ်အချိန်ဖောက်ခွဲပစ်ရမလဲဆိုတာ ဥာဏ်မီသရွေ့ ကောက်ကျစ်ဖို့စဉ်းစားနေလေရဲ့ ။
လူသွားလူလာများဖြင့်စည်ကားလေ့ရှိတဲ့ရွာလယ်လမ်းမမှာတော့ ရွံ့ဗွက်တွေနေရာအတော်များများကိုကြီးစိုးထားလို့လား ၊ အငြိုးတစ်ကြီးရွာချပစ်နိုင်ခြေများတဲ့ ဆည်းဆာဖျက်မိုးကိုစိုးရိမ်နေလို့လားမသိ ခွေးလေခွေးလွင့် မှတစ်ပါး လူသွားလူလာကင်းရှင်းနေသည်။
ဖိနပ်နှစ်ဖက်လက်မှာကိုင် ပုဆိုးတိုတိုဝတ်ပြီး ရွံ့ဗွက်အသွယ်သွယ်ကို သိုင်းနင်းကွက်ကျကျော်ဖြတ်လိုက် ၊လိုရာမရောက်သောဒယီးဒယိုင်ခြေလှမ်းများကြောင့် ဗွက်ထဲချော်ကျလိုက်ဖြင့် လမ်းတစ်လျှောက်ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကြားမှာ ကျနော်တစ်ယောက် popular ကိုဖြစ်လို့။လူပျိုလှည့်ရင်ဝတ်ဖို့ တစ်နေ့ကမှဝယ်ပြီးခါစ ယောပုဆိုးနဲ့ D2 အင်္ကျီအသစ်ကလေးမှာတော့ ရွံ့နှစ်များဖြင့် သနပ်ခါးရေကျဲ လိမ်းနေလေရဲ့။ ဗွက်ပေလည်းမတတ်နိုင်ဘူး .ကိုယ်ကသူ့ကိုတွေ့ချင်နေတာကို။ ဒီလောက်တော့ စွန့်စားရမှာပေါ့။
— * * * – – – * * * – – – * * * – – – * * * – – –
” ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အင်္ကျီတွေ ပုဆိုးတွေ ရွံ့ဗွက်တွေကိုပေလို့ ။ လမ်းမှာချော်လဲလာတာလား ။ အဲ့ဒါကြောင့် မိုးခြောက်မှအလည်လာပါလို့ မိချောကပြောတာ ”
နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး စိုးရိမ်ပြရင်း ဧည့်ဝတ်ပြုနေတဲ့ မိရွှေချောကိုမြင်တော့ အမောတွေကိုပြေလို့။ အမူးကတော့ပြေသေးဘူး။
ခပ်ညုညုလေးပြောလိုက်တော့ သဘောခွေ့သွားတဲ့ မိချောမျက်နှာမှာ ပန်းနုရောင်ရှက်သွေးလေးတွေ ဖြာလျက်။
”လာအိမ်ထဲဝင် ၊အ်ိမ်မှာက ဘယ်သူမှမရှိကြဘူး ။မိချောနဲ့ ဒေါ်လေးပဲရှိကြတာ ။အဖေနဲ့အမေက ရန်ကုန်ကိုသွားကြတယ်။”
မိချောကရှေ့ကသွား ကျနော်ကသူ့နောက်လိုက်ရင်း ကြိတ်ပြီးပျော်နေမိတယ်။
အိမ်ထဲရောက်တော့ သူ့ဒေါ်လေးဒေါ်ဂျမ်းစိန်က ကုလားထိုင်ပေါ်တင်ပလ္လင်ချိတ်ပြီး ခတ်တည်တည်နဲ့ ဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး။
ဒေါ်ဂျမ်းစိန်ဆိုတာက အပျိုကြီး ။ တစ်ရွာလုံးရဲ့အော့ကြောလန်။ အရပ်ပုပြီးအသားမဲသလောက် အလှအပအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သူ ။ မြှောက်ပင့်ပြောတတ်သူ ဟူသမျှသူနှင့်အဆင်ပြေသည်။
”ဒေါ်လေး နေကောင်းလား ။ ဒေါ်လေးဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးက ဒေါ်လေးနဲ့ သိပ်လိုက်တာပဲ”
ဘာဝတ်ဝတ် ဘယ်လိုမှအချိုးမကျမှန်းသိပေမယ့် မချိသွားဖြဲ မနည်းပြုံးပြီး မျက်နှာချိုသွေးလိုက်ရသေး။ ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ မိတ်ကပ်ကိုကာလာစုံခြယ်သထားတဲ့ ကြောက်စရာမျက်နှာကြီး ကျနော့ဘက်လှည့်ပြီး
”ဒေါ်လေးက အ၀တ်အစားကအစ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တာကိုပဲရွေးဝတ်တာကွဲ့” အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ချွဲနွဲ့ပြောနေလိုက်တာ ကိုယ့်ရုပ်ကိုမှအားမနာ။မျက်နှာကကျောက်ပေါက်မာတွေ မပေါ်အောင်မိတ်ကပ်တွေအတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ဖို့ထားပြီး အပြင်ထွက်ကျမတတ်ပြူးကျယ်လွန်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြုံးမပြဘဲပေါ်လွင်နေတဲ့ မလုံမခြုံအပေါ်သွားလေးချောင်းက မွဲခြောက်ခြောက်အသားအရေပေါ်မှာ ဖြူဖွေးခြင်းဂုဏ်ကိုဆောင်လျက်။
”အစ်ကို ခဏစောင့်။ အစ်ကိုစားဖို့ တစ်ခုခုကို အပြင်မှာသွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်”
”နေပါစေ မိချော ။အစ်ကိုမဆာပါဘူး။ မှောင်လည်းမှောင်တော့မယ်ဆိုတော့ မိချောတစ်ယောက်တည်း အပြင်သွားမှာစိတ်မချဘူး”
”ရပါတယ် ၊ မိချောမှာဓာတ်မီးပါပါတယ်။ဆိုင်ကလည်း အရှေ့ဘက်နှစ်အိမ်ကျော်မှာပဲ”
ပြောပြောဆိုဆို တားမရတဲ့ဒေါ်ရွှေမိချောက ဓာတ်မီးဆွဲပြီးထွက်သွားလေပြီ။ကျနော်လည်း ယောင်ရမ်းပြီးပြတင်းပေါက်ဝအထိလိုက်၍ မိချောကျောပြင်ကိုကြည့်ပီး ငေးမိနေမိသည်။
အပြင်မှာမိုးသားမိုးစိုင်တွေတစ်ရိပ်ရိပ်ပြေးနေသည်။မိုးနံ့လေးများ လေညှင်းနဲ့အတူပါလာ၏။ ညနေက ရဲဆေးတင်ထားတဲ့ ယမကာအရှိန်လေးက ခုထိမပြယ်ချင်သေး။
ခေါင်းထဲမှာ နောက်ကျိကျိရီဝေေ၀အရှိန်က ခုထိစွဲထင်နေသည်။ ဩော် ..မိချောလေးရယ် ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ ဟိုအပျိုကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်း မင်းမို့ထားခဲ့ရက်တယ်ကွာ။
”မောင်လေး လာထိုင်လေ ၊လက်ဖက်သုတ်စားပါအုံး”
အစောက မြှောက်ပင့်ပေးမိစကားကိုသဘောကျပြီး နောက်ထပ်မြှောက်ပင့်ပေးမယ့်စကားသံကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ အပျိုကြီးက လောကွတ်ကောင်းနေလေရဲ့။
သက်ပြင်ရှည်ချပြီး မြှောက်ပင့်ပေးရမယ့်စကားလုံးဆန်းကို စဉ်းစားရင်းလေးတွဲ့တွဲ့ခြေလှမ်းများဖြင့် ထိုင်ခုံဆီသို့ဦးတည်လာမိသည်။
ထိုင်ခုံပေါ်သို့ထိုင်ပြီး သူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့ ကျေနပ်စွာပြုံးနေတဲ့သူ့မျက်နှာက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ် စုန်းမကားကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေမိတယ်။
”ခဏစောင့်အုံးမောင်လေး” ပြာပြာသလဲ မီးဖိုချောင်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားလေ၏။
သူထွက်သွားမှ နေသာထိုင်သာရှိသွားလေသည်။ပြန်ဝင်လာတော့ လက်ထဲမှာ GRAND တစ်လုံးပါလာလေသည်။
”ဒါ မိချောတို့အဖေ မမရဲ့အစ်ကိုကြီးသောက်တဲ့ ပုလင်း ”
ပုလင်းကို ကိုင်မြှောက်ပြရင်း ကျေနပ်စွာပြောလေသည်။
”ရော့ ..မောင်လေး သောက်။ မမ ငှဲ့ပေးမယ် ”ပြောပြောဆိုဆို ခွက်ထဲငှဲ့၍ ကျနော့ဘက်သို့တိုးပေးလေသည်။
” နေပါစေ ဒေါ်လေး..ကျနော်ကိုယ်တိုင်ငှဲ့ပါ့မယ် ”
”မမ လို့ခေါ်လည်းရပါတယ်ကွယ် ၊ ဒေါ်လေးလို့ခေါ်တာက မမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ သူစိမ်းဆန်နေသလားလို့” ကနွဲ့ကလျ ပြောနေတဲ့သူ့ပုံစံကြီးက ရွံစရာကောင်းလွန်းလှသည်။
ကျနော်လည်း စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေတာနဲ့ သူငှဲ့ပေးတဲ့ အရက်ခွက်တွေကို တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်ရင်း မိချောလေးပြန်အလာကိုသာ စောင့်မျှော်နေမိတယ်။ သူကတော့ အရက်ခွက်ကလေးငှဲ့ပေးလိုက် ကျနော့မျက်နှာကို ပြုံးကြည့်လိုက် လက်ဖက်ခွက်ကလေး တိုးပေးလိုက်နဲ့ ကြည်နူးနေလေရဲ့ ။ ကျနော့မှာတော့ သူ့ကိုအရွဲ့တိုက်သောက်ရင်းဒီဂရီတွေမြင့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေလေပြီ။
ကျယ်လောင်သောမိုးခြိမ်းသံနှင့်အတူ လျှပ်စီးများဝင်းလက်သွားသည်။ လေပြင်းတိုက်သံများ၊ မိုးပေါက်များအဆက်မပြတ်သဲကြီးမဲကြီးရွာသွန်းလေပြီ။
တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးများလည်း ပြတ်တောက်သွားသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် လျှပ်စီးလက်သည့်အခိုက်အတန့်မှအပ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံး မဲမှောင်နေသည်။
”မမ ကြောက်တယ် မောင်လေးရယ် ” ပြောရင်း ကျနော့ဘေးရောက်လာသည်။ ကျနော် အတော်ကိုအနေကျပ်သွားသည်။ သူ့ဆီက ရေမွှေးနံ့ပြင်းပြင်းတွေကြောင့် ကျနော်ပိုပြီးမူးချင်လာပြီ၊
မထူးတော့ပြီ ၊။ မူးချင်မူးပါစေတော့ ။စိတ်ကကျဉ်းကျပ်လွန်းနေပြီ။ စားပေါ်က ပုလင်းကို မှန်းဆွဲပြီး ကုန်ခမန်းလိလိ မော့ချလိုက်သည်။ ပြီး..စားပွဲပေါ် ပုလင်းကိုပြန်အတင်…
”ဂျိမ်း..ဂျိမ်း..ဂျိမ်းဂျမ်း…….”လျှပ်စီးများ လက်ခနဲဖြစ်သွားပြီး မိုးခြိမ်းသံကြားလေတော့
ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ သူ့လက်အစုံက ကျနော့ကျောကိုသိုင်းဖက်ပြီး ရင်ချင်းကပ်လျက်အနေအထား။မိုးကသဲပါတယ်ဆို လေပြင်းတွေကတစ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ ပွဲကြမ်းနေသည်။
”မမကို ပြန်ဖက်ထားပါ မောင်လေးရယ် မမ ကြောက်လွန်းလို့ပါ”
အမှောင်ထဲမှာ ကြောက်လွန်းနေနဲ့သူ့မျက်နှာကိုမမြင်ရပေမယ့် စ်ိတ်ကူးထဲမှာတွေးကြည့်ရုံနဲ့ ကြက်သီးမွေးညှင်းထလောက်စရာ။
”ဖယ်..ပေး..စမ်း..ပါ..ဗျာ ။ကျနော်..အရက်..သောက်..လို့..မပြီး..သေးဘူး”ကျနော့အသံတွေ ၀ါးတားတားနဲ့မသဲကွဲချင်တော့။မူးနေပြီကိုး။
ဖက်ထားတဲ့ သူ့လက်တွေကို ဖယ်ချရင်း အရက်ပုလင်းကိုယူမယ်ပြင်တော့
”ပုလင်းကို မမ ယူပေးပါ့မယ်ကွယ်”
လက်တစ်ဖက်က ကျနော့ကိုသိုင်းဖက်ထားရင်း ကျန်တစ်ဖက်ဖြင့်ပုလင်းကို စမ်းတစ်ဝါးဝါးရှာဖွေနေစဉ် ..
ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ မိုးခြိမ်းသံနှင့်အတူ အရက်ခွက်ကလေး ကျကွဲသံပါ ရောယှက်သွားလေတော့သည်။
— *** – – – * * * – – – * * * – – – * * * – – –
အိမ်ရှေ့ မှာ အော်ကြီးဟစ်ကြယ်နဲ့ ငိုသံကြားလို့ အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့် လူးလဲထရင်း ပုဆိုးပြင်ဝတ်ပြီး အ်ိမ်အပြင်သို့ထွက်ကြည့် လိုက်မိသည်။ မနေ့ကသောက်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်
ခေါင်းထဲမှာမကြည်မလင်ပဲ။ ကလေးဆိုးကြီးတစ်ယောက်လို အော်ကြီးဟစ်ကြယ်ငိုနေတဲ့သူကို သေချာကြည့်လိုက်မှ
”ဟိုက်…အပျိုကြီး ဒေါ်ဂျမ်းစိန်ပါ့လား ”
မင်း ညတုန်းကလေ ..ညတုန်းက ..အဟီး.ဟီး”သူ့စကားသူမဆက်နိုင် ရှိုက်ကြီးတစ်ငင်ငိုပါလေရော။
”ပြောပြပါဗျာ ကျနော် ညတုန်းကဘာမှားခဲ့လို့လဲ”
စိုးရိမ်ရမှာလား ပျော်ရမှာလား မသိပေမယ့် မိချောလေးနဲ့မှားခဲ့တာဆိုရင်တော့ ကျနော်သိန်းထီပေါက်တာပဲ။
”မှားတာပေါ့ ..မှားတယ်..မင်းသိပ်မှားတယ်.”သူ့အသံမှာ ဒေါသသံ မာနသံ ၀မ်းနည်းသံများရောနှောနေသည်။
သူ့တူမလေး ကျနော့လက်ထဲထည့်လိုက်ရမှာ နှမျောတွန့်တိုပြီးဝမ်းနည်းနေတာလို့ပဲထင်တယ်။
”ကျနော် ဘယ်သူနဲ့မှားခဲ့တာလဲ ..ဟင်”
မချိုမချဉ်မျက်နှာပေးနဲ့မေးလိုက်တဲ့ ကျနော့အမေးကြောင့်ထင်သည်..မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသော ဒေါသမျက်လုံးတစ်စုံဖြင့် ကျနော့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း…
ဟိုက်…အဲ့ဒါမှလွဲပြီ။ ကျနော့နဖူး မြွေပေါက်ပါပြီ ။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ။အရပ်ကတို့ရေ..ကျနော့ကိုကယ်ကြပါအုံး ။ ကျနော့ဘ၀ပျက်ပါပြီဗျ။ ဒီအပျိုကြီးကိုတော့ လက်မထပ်ပါရစေနဲ့ ။
”ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ…”မယုံသင်္ကာ နဲ့ ကျနော်မေးကြည့်လိုက်မိသည်။
သူလက်ညှိုးညွှန်ရာကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့အိမ်လှေကားခြေရင်းမှ ဖိနပ်တစ်ရံ။ ဖိနပ်ရဲ့ပင်ကိုယ်အရောင်မမြင်ရလောက်အောင် ရွံ့ဗွက်တွေပေကျံလို့။ သေချာကြည့်လိုက်မှ ဖိနပ်တစ်ဖက်က
ကျနော့ဖိနပ်ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်က သဲကြိုးပြတ်နေတဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဖြစ်နေတယ်။
ကျနော် သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ ကျနော်တို့
ဖိနပ်ချင်းမှားခဲ့ကြတာပေါ့ ။ ထင်တော့ထင်သား တစ်ခုခုလွဲနေပြီလို့။မနေ့ညက မိချောတို့အိမ်ကအပြန် ဖိနပ်စီးရတာအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တော့အထင်သား။
”အဲ့ဒါ ကိုသာဒင် ငါ့ကိုအမှတ်တရပေးခဲ့တာ။ ငါအမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်း။ ခုတော့ ပျက်စီးကုန်ပြီ။နင်ဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာလဲ.ပြော” ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြင့် နှမျောတမ်းတဖြစ်နေသော
”ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားကောင်း ဆိုတာ ကိုယ့်အမှားကို တာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တိအပြည့်ရှိရမှာပေါ့ ။ ကျနော် တာဝန်ယူပါ့မယ်။ လကုန်ရက် လစာထုတ်တဲ့နေ့ ဒီဖိနပ်ထက်ကောင်းတဲ့
ငှဲ….ငှဲ…..ဖတ်ရှုပေးတဲ့ သယ်ရင်းတွေကို ကျေးဇူး အထူးပါလို့…..
ကနြျော ဒီ အပြိုကွီးနဲ့ မှားခဲ့တယျဆိုတာ…ဝနျခံပါတယျ…။ အဖွဈက ဒီလိုပါ..။
သူ့ဘကျကမမှားဘူး ကနြော့ဘကျကမှားခဲ့တာပါ။ယောကျြားကောငျးဆိုတာ ကိုယျ့အမှားကို တာဝနျယူရဲရမှာပေါ့ ။ကနြော့ အမှားအတှကျ တာဝနျယူဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပွီ။
မှတျမှတျရရ အဲ့ဒီနကေ့ ပေါ့ ။
ကောငျးကငျတဈခှငျစဈခငျးနသေညျ့အလား လြှပျစီးကွောငျးမြားကလကျနကျခဲယမျးမြားပဈဖောကျနသေလို လကျခနဲလကျခနဲ အားမာနျအပွညျ့နဲ့ငွာသံပေးလို့ ၊ပွိုကတြော့မယောငျ မိုးသားတှကေ တဈရှရှေ့ေ့ နဲ့ ဒေါသတှကေိုမွိုသိပျပွီး အမကျြခွောငျးခွောငျးထှကျလို့ ဘယျအခြိနျဖောကျခှဲပဈရမလဲဆိုတာ ဉာဏျမီသရှေ့ ကောကျကဈြဖို့စဉျးစားနလေရေဲ့ ။
လူသှားလူလာမြားဖွငျ့စညျကားလရှေိ့တဲ့ရှာလယျလမျးမမှာတော့ ရှံ့ဗှကျတှနေရောအတျောမြားမြားကိုကွီးစိုးထားလို့လား ၊ အငွိုးတဈကွီးရှာခပြဈနိုငျခွမြေားတဲ့ ဆညျးဆာဖကျြမိုးကိုစိုးရိမျနလေို့လားမသိ ခှေးလခှေေးလှငျ့ မှတဈပါး လူသှားလူလာကငျးရှငျးနသေညျ။
ဖိနပျနှဈဖကျလကျမှာကိုငျ ပုဆိုးတိုတိုဝတျပွီး ရှံ့ဗှကျအသှယျသှယျကို သိုငျးနငျးကှကျကကြျောဖွတျလိုကျ ၊လိုရာမရောကျသောဒယီးဒယိုငျခွလှေမျးမြားကွောငျ့ ဗှကျထဲခြျောကလြိုကျဖွငျ့ လမျးတဈလြှောကျခှေးလခှေေးလှငျ့တှကွေားမှာ ကနြျောတဈယောကျ popular ကိုဖွဈလို့။လူပြိုလှညျ့ရငျဝတျဖို့ တဈနကေ့မှဝယျပွီးခါစ ယောပုဆိုးနဲ့ D2 အကငြ်္ီအသဈကလေးမှာတော့ ရှံ့နှဈမြားဖွငျ့ သနပျခါးရကြေဲ လိမျးနလေရေဲ့။ ဗှကျပလေညျးမတတျနိုငျဘူး .ကိုယျကသူ့ကိုတှခေ့ငျြနတောကို။ ဒီလောကျတော့ စှနျ့စားရမှာပေါ့။
” ဘယျလိုဖွဈတာလဲ အကငြ်္ီတှေ ပုဆိုးတှေ ရှံ့ဗှကျတှကေိုပလေို့ ။ လမျးမှာခြျောလဲလာတာလား ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ မိုးခွောကျမှအလညျလာပါလို့ မိခြောကပွောတာ ”
နှုတျခမျးလေးစူပွီး စိုးရိမျပွရငျး ဧညျ့ဝတျပွုနတေဲ့ မိရှခြေောကိုမွငျတော့ အမောတှကေိုပွလေို့။ အမူးကတော့ပွသေေးဘူး။
ခပျညုညုလေးပွောလိုကျတော့ သဘောခှသှေ့ားတဲ့ မိခြောမကျြနှာမှာ ပနျးနုရောငျရှကျသှေးလေးတှေ ဖွာလကျြ။
”လာအိမျထဲဝငျ ၊အိမျမှာက ဘယျသူမှမရှိကွဘူး ။မိခြောနဲ့ ဒျေါလေးပဲရှိကွတာ ။အဖနေဲ့အမကေ ရနျကုနျကိုသှားကွတယျ။”
မိခြောကရှကေ့သှား ကနြျောကသူ့နောကျလိုကျရငျး ကွိတျပွီးပြျောနမေိတယျ။
အိမျထဲရောကျတော့ သူ့ဒျေါလေးဒျေါဂမျြးစိနျက ကုလားထိုငျပျေါတငျပလ်လငျခြိတျပွီး ခတျတညျတညျနဲ့ ဂရုမစိုကျတဲ့ပုံစံမြိုး။
ဒျေါဂမျြးစိနျဆိုတာက အပြိုကွီး ။ တဈရှာလုံးရဲ့အော့ကွောလနျ။ အရပျပုပွီးအသားမဲသလောကျ အလှအပအလှနျကွိုကျနှဈသကျသူ ။ မွှောကျပငျ့ပွောတတျသူ ဟူသမြှသူနှငျ့အဆငျပွသေညျ။
”ဒျေါလေး နကေောငျးလား ။ ဒျေါလေးဝတျထားတဲ့ အကငြ်္ီလေးက ဒျေါလေးနဲ့ သိပျလိုကျတာပဲ”
ဘာဝတျဝတျ ဘယျလိုမှအခြိုးမကမြှနျးသိပမေယျ့ မခြိသှားဖွဲ မနညျးပွုံးပွီး မကျြနှာခြိုသှေးလိုကျရသေး။ ဒီလိုဆိုလိုကျတော့ မိတျကပျကိုကာလာစုံခွယျသထားတဲ့ ကွောကျစရာမကျြနှာကွီး ကနြော့ဘကျလှညျ့ပွီး
”ဒျေါလေးက အဝတျအစားကအစ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတာကိုပဲရှေးဝတျတာကှဲ့” အသကျအရှယျနဲ့မလိုကျခြှဲနှဲ့ပွောနလေိုကျတာ ကိုယျ့ရုပျကိုမှအားမနာ။မကျြနှာကကြောကျပေါကျမာတှေ မပျေါအောငျမိတျကပျတှအေတုံးလိုကျအတဈလိုကျဖို့ထားပွီး အပွငျထှကျကမြတတျပွူးကယျြလှနျးတဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့ ပွုံးမပွဘဲပျေါလှငျနတေဲ့ မလုံမခွုံအပျေါသှားလေးခြောငျးက မှဲခွောကျခွောကျအသားအရပေျေါမှာ ဖွူဖှေးခွငျးဂုဏျကိုဆောငျလကျြ။
”အဈကို ခဏစောငျ့။ အဈကိုစားဖို့ တဈခုခုကို အပွငျမှာသှားဝယျလိုကျအုံးမယျ”
”နပေါစေ မိခြော ။အဈကိုမဆာပါဘူး။ မှောငျလညျးမှောငျတော့မယျဆိုတော့ မိခြောတဈယောကျတညျး အပွငျသှားမှာစိတျမခဘြူး”
”ရပါတယျ ၊ မိခြောမှာဓာတျမီးပါပါတယျ။ဆိုငျကလညျး အရှဘေ့ကျနှဈအိမျကြျောမှာပဲ”
ပွောပွောဆိုဆို တားမရတဲ့ဒျေါရှမေိခြောက ဓာတျမီးဆှဲပွီးထှကျသှားလပွေီ။ကနြျောလညျး ယောငျရမျးပွီးပွတငျးပေါကျဝအထိလိုကျ၍ မိခြောကြောပွငျကိုကွညျ့ပီး ငေးမိနမေိသညျ။
အပွငျမှာမိုးသားမိုးစိုငျတှတေဈရိပျရိပျပွေးနသေညျ။မိုးနံ့လေးမြား လညှေငျးနဲ့အတူပါလာ၏။ ညနကေ ရဲဆေးတငျထားတဲ့ ယမကာအရှိနျလေးက ခုထိမပွယျခငျြသေး။
ခေါငျးထဲမှာ နောကျကြိကြိရီဝဝေအရှိနျက ခုထိစှဲထငျနသေညျ။ ဩျော ..မိခြောလေးရယျ ဒီအိမျကွီးထဲမှာ ဟိုအပြိုကွီးနဲ့နှဈယောကျတညျး မငျးမို့ထားခဲ့ရကျတယျကှာ။
”မောငျလေး လာထိုငျလေ ၊လကျဖကျသုတျစားပါအုံး”
အစောက မွှောကျပငျ့ပေးမိစကားကိုသဘောကပြွီး နောကျထပျမွှောကျပငျ့ပေးမယျ့စကားသံကိုမြှျောလငျ့နတေဲ့ အပြိုကွီးက လောကှတျကောငျးနလေရေဲ့။
သကျပွငျရှညျခပြွီး မွှောကျပငျ့ပေးရမယျ့စကားလုံးဆနျးကို စဉျးစားရငျးလေးတှဲ့တှဲ့ခွလှေမျးမြားဖွငျ့ ထိုငျခုံဆီသို့ဦးတညျလာမိသညျ။
ထိုငျခုံပျေါသို့ထိုငျပွီး သူ့မကျြနှာကွညျ့လိုကျတော့ ကနြေပျစှာပွုံးနတေဲ့သူ့မကျြနှာက ကွညျ့ခဲ့ဖူးတဲ့ကွောကျမကျဖှယျ စုနျးမကားကိုပွနျလညျအမှတျရစမေိတယျ။
”ခဏစောငျ့အုံးမောငျလေး” ပွာပွာသလဲ မီးဖိုခြောငျခနျးထဲသို့ဝငျသှားလေ၏။
သူထှကျသှားမှ နသောထိုငျသာရှိသှားလသေညျ။ပွနျဝငျလာတော့ လကျထဲမှာ GRAND တဈလုံးပါလာလသေညျ။
”ဒါ မိခြောတို့အဖေ မမရဲ့အဈကိုကွီးသောကျတဲ့ ပုလငျး ”
ပုလငျးကို ကိုငျမွှောကျပွရငျး ကနြေပျစှာပွောလသေညျ။
”ရော့ ..မောငျလေး သောကျ။ မမ ငှဲ့ပေးမယျ ”ပွောပွောဆိုဆို ခှကျထဲငှဲ့၍ ကနြော့ဘကျသို့တိုးပေးလသေညျ။
” နပေါစေ ဒျေါလေး..ကနြျောကိုယျတိုငျငှဲ့ပါ့မယျ ”
”မမ လို့ချေါလညျးရပါတယျကှယျ ၊ ဒျေါလေးလို့ချေါတာက မမတို့နှဈယောကျကွားမှာ သူစိမျးဆနျနသေလားလို့” ကနှဲ့ကလြ ပွောနတေဲ့သူ့ပုံစံကွီးက ရှံစရာကောငျးလှနျးလှသညျ။
ကနြျောလညျး စိတျကဉျြးကပျြနတောနဲ့ သူငှဲ့ပေးတဲ့ အရကျခှကျတှကေို တဈခှကျပွီးတဈခှကျ သောကျရငျး မိခြောလေးပွနျအလာကိုသာ စောငျ့မြှျောနမေိတယျ။ သူကတော့ အရကျခှကျကလေးငှဲ့ပေးလိုကျ ကနြော့မကျြနှာကို ပွုံးကွညျ့လိုကျ လကျဖကျခှကျကလေး တိုးပေးလိုကျနဲ့ ကွညျနူးနလေရေဲ့ ။ ကနြော့မှာတော့ သူ့ကိုအရှဲ့တိုကျသောကျရငျးဒီဂရီတှမွေငျ့ခငျြသလိုလိုဖွဈနလေပွေီ။
ကယျြလောငျသောမိုးခွိမျးသံနှငျ့အတူ လြှပျစီးမြားဝငျးလကျသှားသညျ။ လပွေငျးတိုကျသံမြား၊ မိုးပေါကျမြားအဆကျမပွတျသဲကွီးမဲကွီးရှာသှနျးလပွေီ။
တဈရှာလုံး လြှပျစဈမီးမြားလညျး ပွတျတောကျသှားသညျ။ တဈခကျြတဈခကျြ လြှပျစီးလကျသညျ့အခိုကျအတနျ့မှအပ ပတျဝနျးကငျြတဈခှငျလုံး မဲမှောငျနသေညျ။
”မမ ကွောကျတယျ မောငျလေးရယျ ” ပွောရငျး ကနြော့ဘေးရောကျလာသညျ။ ကနြျော အတျောကိုအနကေပျြသှားသညျ။ သူ့ဆီက ရမှေေးနံ့ပွငျးပွငျးတှကွေောငျ့ ကနြျောပိုပွီးမူးခငျြလာပွီ၊
မထူးတော့ပွီ ၊။ မူးခငျြမူးပါစတေော့ ။စိတျကကဉျြးကပျြလှနျးနပွေီ။ စားပျေါက ပုလငျးကို မှနျးဆှဲပွီး ကုနျခမနျးလိလိ မော့ခလြိုကျသညျ။ ပွီး..စားပှဲပျေါ ပုလငျးကိုပွနျအတငျ…
”ဂြိမျး..ဂြိမျး..ဂြိမျးဂမျြး…….”လြှပျစီးမြား လကျခနဲဖွဈသှားပွီး မိုးခွိမျးသံကွားလတေော့
ကွောကျလနျ့တကွားနဲ့ သူ့လကျအစုံက ကနြော့ကြောကိုသိုငျးဖကျပွီး ရငျခငျြးကပျလကျြအနအေထား။မိုးကသဲပါတယျဆို လပွေငျးတှကေတဈဝုနျးဝုနျးနဲ့ ပှဲကွမျးနသေညျ။
”မမကို ပွနျဖကျထားပါ မောငျလေးရယျ မမ ကွောကျလှနျးလို့ပါ”
အမှောငျထဲမှာ ကွောကျလှနျးနနေဲ့သူ့မကျြနှာကိုမမွငျရပမေယျ့ စိတျကူးထဲမှာတှေးကွညျ့ရုံနဲ့ ကွကျသီးမှေးညှငျးထလောကျစရာ။
”ဖယျ..ပေး..စမျး..ပါ..ဗြာ ။ကနြျော..အရကျ..သောကျ..လို့..မပွီး..သေးဘူး”ကနြော့အသံတှေ ဝါးတားတားနဲ့မသဲကှဲခငျြတော့။မူးနပွေီကိုး။
ဖကျထားတဲ့ သူ့လကျတှကေို ဖယျခရြငျး အရကျပုလငျးကိုယူမယျပွငျတော့
”ပုလငျးကို မမ ယူပေးပါ့မယျကှယျ”
လကျတဈဖကျက ကနြော့ကိုသိုငျးဖကျထားရငျး ကနျြတဈဖကျဖွငျ့ပုလငျးကို စမျးတဈဝါးဝါးရှာဖှနေစေဉျ ..
ဒီတဈကွိမျတှငျတော့ မိုးခွိမျးသံနှငျ့အတူ အရကျခှကျကလေး ကကြှဲသံပါ ရောယှကျသှားလတေော့သညျ။
အိမျရှေ့ မှာ အျောကွီးဟဈကွယျနဲ့ ငိုသံကွားလို့ အိပျခငျြမူးတူးဖွငျ့ လူးလဲထရငျး ပုဆိုးပွငျဝတျပွီး အိမျအပွငျသို့ထှကျကွညျ့ လိုကျမိသညျ။ မနကေ့သောကျထားတဲ့အရှိနျကွောငျ့
ခေါငျးထဲမှာမကွညျမလငျပဲ။ ကလေးဆိုးကွီးတဈယောကျလို အျောကွီးဟဈကွယျငိုနတေဲ့သူကို သခြောကွညျ့လိုကျမှ
”ဟိုကျ…အပြိုကွီး ဒျေါဂမျြးစိနျပါ့လား ”
မငျး ညတုနျးကလေ ..ညတုနျးက ..အဟီး.ဟီး”သူ့စကားသူမဆကျနိုငျ ရှိုကျကွီးတဈငငျငိုပါလရေော။
”ပွောပွပါဗြာ ကနြျော ညတုနျးကဘာမှားခဲ့လို့လဲ”
စိုးရိမျရမှာလား ပြျောရမှာလား မသိပမေယျ့ မိခြောလေးနဲ့မှားခဲ့တာဆိုရငျတော့ ကနြျောသိနျးထီပေါကျတာပဲ။
”မှားတာပေါ့ ..မှားတယျ..မငျးသိပျမှားတယျ.”သူ့အသံမှာ ဒေါသသံ မာနသံ ဝမျးနညျးသံမြားရောနှောနသေညျ။
သူ့တူမလေး ကနြော့လကျထဲထညျ့လိုကျရမှာ နှမြောတှနျ့တိုပွီးဝမျးနညျးနတောလို့ပဲထငျတယျ။
”ကနြျော ဘယျသူနဲ့မှားခဲ့တာလဲ ..ဟငျ”
မခြိုမခဉျြမကျြနှာပေးနဲ့မေးလိုကျတဲ့ ကနြော့အမေးကွောငျ့ထငျသညျ..မီးဝငျးဝငျးတောကျနသေော ဒေါသမကျြလုံးတဈစုံဖွငျ့ ကနြော့ကိုစိုကျကွညျ့ရငျး…
ဟိုကျ…အဲ့ဒါမှလှဲပွီ။ ကနြော့နဖူး မွှပေေါကျပါပွီ ။ဒါမဖွဈနိုငျဘူး လုံးဝမဖွဈနိုငျဘူး ။အရပျကတို့ရေ..ကနြော့ကိုကယျကွပါအုံး ။ ကနြော့ဘဝပကျြပါပွီဗြ။ ဒီအပြိုကွီးကိုတော့ လကျမထပျပါရစနေဲ့ ။
”ဟုတျရဲ့လားဗြာ…”မယုံသင်ျကာ နဲ့ ကနြျောမေးကွညျ့လိုကျမိသညျ။
သူလကျညှိုးညှနျရာကွညျ့လိုကျတော့ ကနြော့အိမျလှကေားခွရေငျးမှ ဖိနပျတဈရံ။ ဖိနပျရဲ့ပငျကိုယျအရောငျမမွငျရလောကျအောငျ ရှံ့ဗှကျတှပေကြေံလို့။ သခြောကွညျ့လိုကျမှ ဖိနပျတဈဖကျက
ကနြော့ဖိနပျဖွဈပွီး ကနျြတဈဖကျက သဲကွိုးပွတျနတေဲ့ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျဖွဈနတေယျ။
ကနြျော သဘောပေါကျလိုကျပါပွီ။ ကနြျောတို့
ဖိနပျခငျြးမှားခဲ့ကွတာပေါ့ ။ ထငျတော့ထငျသား တဈခုခုလှဲနပွေီလို့။မနညေ့က မိခြောတို့အိမျကအပွနျ ဖိနပျစီးရတာအဆငျမပွဘေူးလို့ထငျတော့အထငျသား။
”အဲ့ဒါ ကိုသာဒငျ ငါ့ကိုအမှတျတရပေးခဲ့တာ။ ငါအမွတျတနိုးတနျဖိုးထားခဲ့တဲ့ပစ်စညျး။ ခုတော့ ပကျြစီးကုနျပွီ။နငျဘယျလိုတာဝနျယူမှာလဲ.ပွော” ဝမျးနညျးပကျလကျဖွငျ့ နှမြောတမျးတဖွဈနသေော
”ဟုတျကဲ့ယောကျြားကောငျး ဆိုတာ ကိုယျ့အမှားကို တာဝနျယူရဲတဲ့သတ်တိအပွညျ့ရှိရမှာပေါ့ ။ ကနြျော တာဝနျယူပါ့မယျ။ လကုနျရကျ လစာထုတျတဲ့နေ့ ဒီဖိနပျထကျကောငျးတဲ့
ငှဲ….ငှဲ…..ဖတျရှုပေးတဲ့ သယျရငျးတှကေို ကြေးဇူး အထူးပါလို့…..
Author adminPosted on October 31, 2017 Categories NewsLeaveacomment on ကျနော် ဒီ အပျိုကြီးနဲ့ မှားခဲ့တယ်ဆိုတာ…၀န်ခံပါတယ်…။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ..။
ကြက်သွန်နီခွါပြီးတိုင်း အခွံတွေကို လွှင့်ပစ်တတ်ကြတယ်မလား ။ ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြိးရင်တေ့ာ လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ကြက်သွန်နီ အခွံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စားလို့တော့မရပါဘူးနော် ..
ကြက်သွန်နီအခွံမှာ ရောင်ရမ်းနာကြင်မှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သဘာဝအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ် ။ ခွာထားပြီးသော ကြက်သွန်နီအခွံတွေကို ရေထဲတစ်ညလုံး စိမ်ထားပါ ။ ထိုရေဖြင့် အရေပြားပွန်းရှခြင်း ၊ အလာဂျီဖြစ်ခြင်း ၊ ထိခိုက်ရှနာဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ် ။
ခြင်နှင့် ယင်ကောင်ကဲ့သို့သော အင်းစက်ပိုးမွှားတွေ အိမ်မှာရှိနေရင်တော့ ကြက်သွန်နီအခွံက ကူညီမောင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကြက်သွန်နီအခွံ တစ်ညလုံးစိမ်ထားတဲ့ရေကို ခွက်ထဲအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပြတင်းပေါက် နှင့် အင်းစက်ပိုးမွှားရှိတတ်သော နေရာများတွင် ချထားပါ။ ကြက်သွန်နံ့ကြောင့် အင်းစက်တွေ အဝေးခွာပြေးသွားကြမှာပါ
ကြက်သွန်နီအခွံကို ရေဖြင့်ပြုတ်ပြီး အအေးခံကာ ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းမှာ ခေါင်းပေါ်လောင်းချပေးခြင်းက ဆံပင်ကို ပျော့ပြောင်းစေပြီး ဆံပင်အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်တွေကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ် ။
အမှိုကျလို့ထငျထားကွတဲ့ ကွကျသှနျနီအခှံမှာ မယုံကွညျနိုငျစရာ အာနိသငျတှေ ရှိနေ …!
ကွကျသှနျနီခှါပွီးတိုငျး အခှံတှကေို လှငျ့ပဈတတျကွတယျမလား ။ ဒီအကွောငျးအရာကို ဖတျပွိးရငျတေ့ာ လှငျ့ပဈမိမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး ။ ကွကျသှနျနီ အခှံမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ စားလို့တော့မရပါဘူးနျော ..
ခွငျနှငျ့ ယငျကောငျကဲ့သို့သော အငျးစကျပိုးမှားတှေ အိမျမှာရှိနရေငျတော့ ကွကျသှနျနီအခှံက ကူညီမောငျးထုတျပေးနိုငျပါတယျ ။ အထကျဖျောပွပါအတိုငျး ကွကျသှနျနီအခှံ တဈညလုံးစိမျထားတဲ့ရကေို ခှကျထဲအနညျးငယျထညျ့ပွီး ပွတငျးပေါကျ နှငျ့ အငျးစကျပိုးမှားရှိတတျသော နရောမြားတှငျ ခထြားပါ။ ကွကျသှနျနံ့ကွောငျ့ အငျးစကျတှေ အဝေးခှာပွေးသှားကွမှာပါ
Author adminPosted on October 31, 2017 Categories NewsLeaveacomment on အမှိုက်လို့ထင်ထားကြတဲ့ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အာနိသင်တွေ ရှိနေ …